Nezvedu | Jiangxi Royal Kunze & Export Co, Ltd.
Isu, Jiangxi Royal Kunze & Export Co, Ltd., vane makore anopfuura makumi maviri ezviitiko muHot Stamping Mapepa, Holographic Firimu, Iridescent / Dichroic Firimu, Iridescent / Dichroic Window Firimu, Iridescent PVC / TPU Firimu, Akanaka Makemikari etc.
Tiri muJust In Time (JIT) yekupindura sisitimu iyo inovimbisa yako mibvunzo uye zvinodikanwa zvinopindurwa pasina kunonoka, zvichikubatsira iwe kuchinjika kune anochinja mamiriro emusika nemabasa anoshanda.
Kubva pakagadzwa pedu, tanga tichitora mamwe matanho ekuchengetedza huwandu hwenzvimbo yepamusoro. Zvitifiketi zvinogona kupihwa zvinoenderana nezvaunoda, senge SGS, TST, REACH, Fekitori Yekuongorora Ripoti, isu tine zvakawanda kupfuura zvaunoda.
Kuvimba nekutendeka, basa rakanaka uye hunyanzvi, tinoita zvese zvatinogona kuti tione mhando yepamusoro yevatengi vedu. Kuburikidza nemakore ekuvandudza, bhizinesi redu vhoriyamu uye mabhenefiti ari kuwedzera zvakatsiga, uye timu yenyanzvi dzekutengesa dzenyika dzese dzakadzidziswa. Isu tasimbisa kwenguva yakareba co mashandiro nevatengi vanobva kuAsia, America neEurope. Uyezve, kutariswa kwakasarudzika kunobhadharwa kune kuvandudza bhizinesi tsika. Icho chinangwa chedu kukura kuve inoshamisa kambani yazvino.
Taura nesu ikozvino! Kungotinya kuti uwane mupi anovimbika kuChina uyezve bhizinesi rako richava nyore uye rinotsvedzerera. Tichaedza nepatinogona napo kusangana nekugutsikana kwako. Hazvina kunonoka kutanga kubva ikozvino ~
Kuvimbika ndiyo chete yepazasi pehunhu hwetsika hwatakatara, uye mutoro wemagariro ndicho chisungo chatinofanira kutora.
Mutengi Kutarisa- Kugutsikana kwevatengi ndicho chinangwa chekupedzisira chebasa redu rese.
Kubatana- Isu tinonyatsoziva kuti chete timu rakabatana, rakabatana, rinovimbana, uye rinobatsirana rinogona kubatsira kambani kukura zvine hutano.
Innovation-Kugara uchipaza kuburikidza nehunhu hwesimba ndiko kutyaira kuchengetedza ikambani kusimudzira kusimudzira. Iri zvakare ibasa redu kutevera zvigadzirwa zvakakwana uye inoshanda mashandiro ekushandisa.